Autotech mmalite Autochek na-emechi ego mkpụrụ $13.1M
Debanye aha iji nweta mmelite
Autotech Startup Autochek na-emechi ego mkpụrụ $13.1M
TLcom Capital na 4DX Ventures na-eduzi gburugburu ụlọ ọrụ Autotech Africa na-eduga n'ịbawanye nkà na ụzụ ya ma mee ka mgbasawanye ya dịkwuo elu.
by Ngwa Afrika
1 ọnwa gara aga
Autochek, ụlọ ọrụ teknụzụ ụgbọ ala na-akwado ego ego ụgbọ ala n'ofe Africa, enwetala $13.1mn na ego mkpụrụ.
Ndị na-etinye ego na-esochi ya, TLcom Capital na 4DX Ventures, agba a gụnyekwara ntinye aka site na ndị na-etinye ego dị ugbu a, Golden Palm Investments, Enza Capital, Lateral Capital yana ndị sonyere ọhụrụ, ASK Capital na Mobility 54 Investment SAS (isi obodo ahụ. ogwe aka nke Toyota Tsusho Corporation / CFAO Group).
Site n'inweta ego ọhụrụ ahụ n'okpuru otu afọ ka Autochek nwesịrị $3.4mn tupu mkpụrụ, ndị na-achụ ego na-edu ndú nke Autochek buru ụzọ mee ya - TLcom Capital na 4DX Ventures.
Dị ka akụkụ nke atụmatụ uto nke Autochek, a ga-ebuga isi obodo ahụ iji kwalite usoro nhazi ego mgbazinye ụgbọ ala na ime ka ụkwụ ya dị omimi na West Africa, malite na ntinye ya na Cote d'Ivoire na nso nso a.
Mmalite Mobility Yassir na-echekwa ego $30M Series A
Future Academy Africa meriri N250k Simon Agu Prize maka onye ọchụnta ego kacha mma 2021
Egypt Legaltech Startup Hekouky na-enweta ego izizi mkpụrụ ekpugherebeghị
Nigerian Startup Sabi nwetara $6M iji jee ozi maka ngalaba na-abụghị nke Africa
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ na-agbasa akara ukwu ya ngwa ngwa n'ofe East Africa, na-eso nweta Cheki Kenya na Cheki Uganda na nso nso a, ahịa ahịa akpaaka n'ịntanetị nke East Africa.
Dị ka akụkụ nke itinye ego site na Mobility54, Autochek ga na-akwado nnukwu ụlọ ahịa azụmaahịa Toyota Tsusho gafee mba Africa 46 iji mee ka mgbasawanye ya dịkwuo omimi.
Amalitere na Ọktoba 2020 wee na-arụ ọrụ n'ofe East na West Africa na mba 5 - Nigeria, Kenya, Ghana, Uganda na Cote d'Ivoire; Autochek na-ejikọta teknụzụ, nke nyocha data na-akwado iji mee ka mbanye ego akpaaka na-abanye na kọntinent ahụ.
Kwadoro site na algọridim uru fọdụrụnụ ya, Autochek arụpụtala ihe ngwọta dijitalụ dị n'ime ụlọ dị ka njikwa nkwekọrịta, Sistemụ Njikwa Dealer na sistemu CRM nke aka ya maka ijikwa ọrụ ndị otu n'ime gburugburu ebe obibi dị ka ego ụgbọ ala, nyocha, ọnụahịa, na njikwa ngwa ahịa.
Ebe ọ bụ na ọ na-ebuli mkpụrụ mbụ na Nọvemba 2020, ikpo okwu enwetala traction ngwa ngwa n'ofe azụmaahịa ya, ọkachasị na mpaghara itinye ego na akpaaka ebe ọnụ ọgụgụ nke ngwa mbinye ego agbaziri bilitere site na 10 na Nọvemba ruo ihe karịrị 46,000 ruo taa.
Autochek na ụlọ akụ 70 na-emekọ ihe ugbu a na kọntinent ahụ gụnyere ndị isi egwuregwu mpaghara dịka Access Bank, Ecobank, UBA, Bank of Africa na NCBA Bank.
Mmalite a enwetala ọtụtụ isi ihe dị mkpa kemgbe mmalite nke afọ gụnyere ihe karịrị ndị na-ere ahịa 1000 na netwọkụ Autochek na-arụsi ọrụ ike na-eji usoro nhazi mbinye ego, yana ihe karịrị ụgbọ ala 15,000 enwetara ikike na ego n'ahịa Autochek n'ofe ahịa ya.
N'ime afọ ahụ, Autochek weputara ikpo okwu ego nke gwongworo yana ego nke ụgbọ ala ọhụrụ na nso nso a.
N'ikwu okwu n'akụkụ nke ọzọ nke uto ngwa ngwa nke Autochek na-esochi ego ya, Etop Ikpe, Onye guzobere na onye isi nke Autochek, kwuru:
"Na Autochek, ike anyị na-anya bụ ịbawanye ntinye ego na kọntinent; Ọnụego nnabata ahịa na nkwado nke ndị mmekọ ụlọ akụ anyị na mba ndị anyị na-arụ ọrụ na ya tụrụ anyị n'anya.
Anyị batara na oghere a n'ịmara na anyị na-alụso otu n'ime ihe ịma aka kachasị mkpa maka ngalaba ụgbọ ala Afrịka - enweghị usoro ntinye ego dị mfe, dijitalụ-nke mbụ. Site na ijikọta nka na netwọkụ anyị, anyị enweela ike ịme mmetụta na mpaghara ụgbọ ala.
“Anyị nwere nnọọ obi ụtọ maka ọganihu anyị nweworo n'obere oge. Site na ego a na nkwado nke ndị na-etinye ego na atụmatụ anyị, ndị otu niile nọ na Autochek raara onwe ha nye inye ndị ahịa na ndị mmekọ ọrụ pụrụ iche, yana ibuga teknụzụ anyị n'ofe Africa. "
Andreata Muforo, Onye Mmekọ na TLcom, kwuru "Autochek enwetala nnukwu traction n'otu n'ime isi vertical Africa ma na-enwe ọganihu dị egwu n'iweta nghọta na arụmọrụ na ụlọ ọrụ a dị mgbagwoju anya na nke kewara ekewa.
Ntọala nke uto ya bụ onye ndu siri ike nke onye isi oche ya, Etop Ikpe, onye nrụpụta ugboro ugboro n'ahịa ụgbọ ala nke ahụmịhe ọkwa ụwa nyere anyị obi ike ibido itinye ego na Autochek na 2020.
Anyị na-atụ anya isiakwụkwọ na-esote nke uto Autochek ka ọ na-aga n'ihu na-emeghe isi ihe dị elu nke ka na-ehi ụra na mpaghara ụgbọ ala Africa ruo ọtụtụ iri afọ. "
Walter Baddoo, Onye Mmekọ jikwaa na 4DX Ventures, kwuru, "Autochek na-agbanwegharị ụlọ ọrụ ụgbọ ala n'Africa site n'inye mma na nhọrọ nhọrọ nke ikpo okwu e-azụmahịa akpaaka yana ngbanwe nke ego.
Anyị na ndị otu a na-enwe obi ụtọ na-arụkọ ọrụ ruo ugbu a, ha egosipụtawokwa nkà, ọchịchọ, na ngalaba ngalaba dị mkpa iji wuo ahụmahụ zuru ezu nke njedebe ụgbọ ala maka ndị ahịa. Obi dị anyị ụtọ iso ndị otu a na-akpakọrịta ka ha na-agbaso usoro uto ha na-esote. "
N'agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ $ 45bn, ahịa ụgbọ ala nke Africa nwere naanị 5% ntinye ego ntinye ego, na-egosi ọdịiche dị ukwuu na ọnụego 98% na 99% na Europe na USA n'otu n'otu.
N'ihi enweghị nghọta sitere na mpaghara ụgbọ ala, ọ nweghị ụzọ ndị na-agbazinye ego ga-esi ghọta uru ụgbọ ala ugbu a na nke fọdụrụnụ, na-eme ka enweghị mmasị na-enye ego mgbazinye.
Otú ọ dị, site na njikọ Autochek guzobere na ndị na-ere ụgbọ ala na nyocha 150-point nyocha na ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnweta ozi dị mkpa na àgwà na ọnọdụ nke ụgbọ ala dị iche iche, na-enye ndị na-agbazinye ego ntụkwasị obi na nghọta dị oke mkpa iji mee mkpebi ziri ezi.
Dabere na algọridim ya, Autochek nwekwara ike ịmepụta profaịlụ kredit n'aha ndị ahịa ma belata usoro ntinye ego nke ọma site na ụbọchị 40-45 ruo awa 48.
Ngwa mkpanaka Autochek dị ugbu a dị na android na a ga-ebido ngwa ngwa na iOS.
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Idenye aha na teknụzụ kwa izu maka mmelite
Jikọọ @techbuildafrica na Telegram
Idenye aha anyị
Anata kwa ụbọchị guest
Nabata mmelite kwa izu
Africa Data Centers weputara ihe owuwu 10MW na Lagos
SOSV ahọpụtara 3 mmalite ndị Africa maka ndị otu Cross-border
Arnergy na-ewepụta Initiative Diaspora for Clean Energy Remittances
Usoro teknụzụ: Ime ka usoro njem dị mfe na ihe ọhụrụ - Oluwatobi Fakayode
NCC eweghachitela ọrụ ekwentị na Kaduna steeti
Egypt Logistics Startup Bosta na-ekwupụta Mgbasawanye
Iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ lụso ịzụ ahịa mmadụ ọgụ [ICT Clinic]
Ọrụ Nkà na ụzụ n'ịlụso ibibi ụmụ nwanyị ọgụ (FGM)
Insurtech Startup Insurpass ndị mmekọ AXA Mansard, na-enye mkpuchi ahụike ịnwetanwu maka ndị Naijiria
2013-2021 techbuild.africa. Ikike niile echekwabara.
Na-agagharị n’ Sitentanet